कांग्रेस कहाँ छ? भन्नेलाई विश्वप्रकाशको... :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
कांग्रेस कहाँ छ? भन्नेलाई विश्वप्रकाशको जवाफ - ओली र प्रचण्डको क्षेत्रमा सोध्नू बिरालोको कथा सुनाउँदै शर्माले भने- आजै सच्चिने कि भोलि सकिने?
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, मंसिर १६
शनिबार भएको उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको केहीबेरपछि सोमबार अपरान्ह नेपाली कांग्रेसले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सुरूमै मतपरिणामले कांग्रेसलाई उत्साही बनाएको बताए।
'कम्युनिष्टको गढ मानिने भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा क्षेत्र (क) मा कृष्णलाल भँडेल, धरान उपमहानगरको मेयरमा तिलक राई र भरतपुर -१६ मा चुनाव जितेकोमा कांग्रेस खुसी छ,' उनले भने।
यो मतपरिणामले सरकारलाई आफ्ना गतिविधि समयमै सच्याएर अघि बढ्न दबाब दिएको कांग्रेसको व्याख्या छ।
प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस कहाँ छ? भन्ने प्रश्न गर्नेलाई चितवन, सुनसरीको धरान र भक्तपुर गएर सोध्न आग्रह गरे।
‘उपनिर्वाचन अघि वा पछि कसैले कांग्रेस कहाँ छ भनेर सोधे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर भएको भक्तपुर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र भरतपुर-१६ र प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र घोराहीमा गएर सोध्नू,’ प्रवक्ता शर्माले जवाफ दिए।
उपनिर्वाचनको मतपरिणामले दूरगामी अर्थ राख्ने सन्देश दिएको कांग्रेसको मूल्यांकन रहेको उनले बताए।
‘मतदातासमक्ष आभार र बधाई दिन चाहन्छौं,’ उनले थपे, ‘यो मतले कांग्रेसको आत्मबल अभिवृद्धि गरेको छ।’
उनले दुई तिहाइ मतप्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकार जनतामाझ अलोकप्रिय बन्दै गएको पुष्टि भएको उल्लेख गरे।
‘मत घट्नुले सरकार अलोकप्रिय छ भन्ने पुष्टि गर्छ,’ उनले भने।
‘हामीले भनेका थियौं, यो चुनावले सरकार बनाउन वा गिराउन भूमिका खेल्दैन,’ उनले भने, ‘तर तपाईंको एक मतले सरकार सच्चिन दबाब दिन्छ। सरकारलाई सच्याउन प्रष्ट ढंगले मत आएको छ।’
शर्माले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै भने- यहाँ नेकपा उम्मेदवार विजयी भएका छन् तर कांग्रेसको पहिलेको तुलनामा मत बढेको छ।
‘हामीले ७८ बाट मत बढाएर ३१० पुर्‍यायौं,’ उनले भने, ‘२०७४ सालको चुनावमा एमाले एक्लैले ४५४ मत ल्याएको थियो। माओवादीले १८७ मत ल्याएको हो। अहिले एकीकृत भइसकेको नेकपाको ६१५ मत हुन्थ्यो। तर जम्मा ५२८ मतले नेकपा विजयी भयो। मत घट्यो।’
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भोटका लागि भएको एकीकरणको अब औचित्य सकिएको तर्क गरे।
आफ्नो तर्क अर्थ्याउन उनले बिरालोको कथा पनि सुनाए।
‘एक किलो तौलको बिरालोले एक किलो मासु खाएपछि जोख्दा एक किलो मात्रै छ, तौल बढेन,’ उनले भने, ‘अब त्यो एक किलोलाई के भन्ने? बिरालो भनौं भने मासु खोइ? मासु भनौं भने बिरालो खोइ भन्ने अवस्था आउँछ। यस्तै अवस्था एमाले-माओवादी एकतापछिको चुनावी गणित (भोट) मा देखियो।’
उनले थपे- जुन औचित्यका लागि एक भएका थिए सायद अब त्यो औचित्य सकिँदै गएको छ।
उनले सरकार लोकप्रिय नै छ भनेर बालुवाटारमा बस्नेहरूले दाबी गरे पनि मतपरिणामले अवस्था त्यो भन्दा भिन्न रहेको देखाएको उल्लेख गरे।
‘आजै सच्चिने कि भोलि सकिने भन्ने सन्देश ग्रहण गर्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने।
२८ विभाग, तरूण, नेविसंघलगायत भातृ संस्था भद्रगोल भएको अवस्थामा कसरी मतपरिणाम कांग्रेसको पक्षमा आएको हो? भन्ने प्रश्नमा शर्माले आन्तरिक समस्या छिट्टै हल गरिने बताए।
‘अनेक प्रतिकूलताका बीचमा यतिको मत प्राप्त गर्नु राम्रो हो। बाहिरको गति र आन्तरिक रूपमा सुध्रदै गएको सन्देश हो,’ उनले भने, ‘यो केबल सरकारको विपक्षमा आएको मत होइन। पार्टी आन्तरिक रूपमा सुदृढ गरेको प्रभाव हो। अन्तरिम संरचना बनाएको, पदाधिकारी तह बनेको र नेता/कार्यकर्ता प्रशिक्षण गरेकोले पनि हो।’
उनले दुई चरण सकिएको हिमाल, पहाड, तराई जागरण अभियानले पनि नेता/कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाएको र जनतासँग प्रत्यक्ष भेट्ने अवसर मिल्दा मतपरिणाम राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १६, २०७६, ०८:०७:००